လိင်နှင့်စိတ်ကျရောဂါ - ဦး နှောက်တွင်၊ စိတ်မဟုတ်ပါ - Brain On Porn
စိတ်ရောဂါရစ်ချတ်တစ်ဦးက Friedman တို့က
ဒါမှမဟုတ်လား။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာမဟုတ်သည့်လူနာအတော်များများကိုတွေ့ကြုံခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဟုထင်ရသည်
လူနာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်လူငယ်တစ် ဦး ကဤနည်းကိုဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည် -“ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့ခန့်သည်ပကတိနာကျင်ကိုက်ခဲမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုခံစားရတယ်။ ”
ကောင်းစွာထိန်းညှိ, Hard-အလုပ်လုပ်, မိတ်ဆွေတွေနဲ့တစ်ဦးရငျးနှီးခစျြမိသားစုအများကြီး: ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူကဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါနှစ်ဦးစလုံးကျန်းမာရေးစင်ကြယ်ဥပဒေကြမ်း, ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ကျွန်တော်ရှင်းပြချက်ကိုအလွယ်တကူချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ သူဟာလိင်ဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းစရာဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ဘယ်သူလဲမ?
ငါအကောင်းတစ်ဦးရှင်းပြချက်အဘို့, တယောက်ကိုမျှငါမတွေ့ရှာနိုင်နိုင်အဖြစ်ဒါပေမယ့်ရှာပါ။ မိမိအလက္ခဏာတွေနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအတော်လေးမှန်ကန်ခဲ့ကြသော်လည်း, ငါသူကုသမှုလိုအပ်တဲ့အဓိကစိတ်ရောဂါပြဿနာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကသူ့ကိုပြောသည်။ သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုငါ့ရုံးခန်းထွက်ခွာစိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။
သူ့နာမည်ကိုငါသိပ်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ နောက်လူနာတစ်ယောက်နဲ့ထပ်တူတိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်။ သူမသည်အသက် (၃၂) နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ (၄) နာရီမှခြောက်နာရီအထိပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးအော်ဂဇင်ပြီးနောက်တစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ အရမ်းမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာသူမလိင်ကိုရှောင်ရှားရန်စတင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကတစ် psychoanalyst လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် - psychopathology ဖုံးကွယ်၌သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လူသိများနေတဲ့လူကို - ရသေးအခြားအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုခေါ်လေ၏။ သူဟာလိင်ပြီးနောက်နာရီပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကြောင်းပြင်းထန်သောစိတ်ကျရောဂါ မှလွဲ. Psychiatric ကျန်းမာအဖြစ်ရှုမြင်တော်မူသောတစ်ဦး 24 နှစ်အရွယ်လူကိုစဉျးစားမဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးပြီးနောက်အနည်းငယ်ဝမ်းနည်းမှုအကြောင်းကိုထူးဆန်းတဲ့အရာမရှိ။ စကားကိုသွားသည်နှင့်အမျှလိင်ပြီးနောက်အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များဝမ်းနည်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ထိုလူနာသည်အလွန်ရှည်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်မျှသာမပျော်ရွှင်အဖြစ်ပယ်ချခံရဖို့လည်းနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်ပြင်းထန်သော dysphoria ခံစားခဲ့ရသညျ။
သို့တိုင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းပြချက်အကြောင်းကိုမှနျးဖို့သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ စိတ်ရောဂါအရာအားလုံးရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်းကလူ့အပြုအမူကိုလြှို့ဝှကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓိပ်ပာယျနှငျ့ permeated ကြောင်းပြောနေနောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သောလိင်သူ့ဟာသူ မှလွဲ. sex အကြောင်းကြောင်းပြက်လုံးမှကြိုက်တယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဒီကိစ္စများတွင်, ဤလူနာရွားလှခံစားမိစေလိင်၏ neurobiology အတွက် quirk ထက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ဘာမျှမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဟုတ်မဟုတ်အံ့ဩကြ၏။
Little ကလိင်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ 2005 ခုနှစ်တွင်နယ်သာလန်နိုင်ငံ Groningen ကတက္ကသိုလ်မှဒေါက်တာ Gert Holstege orgasm စဉ်အတွင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှ positron ထုတ်လွှတ် tomography ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကအခြားအပြောင်းအလဲများကြားတွင်, အ amygdala အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချွန်ထက်လျော့နည်းသွား, ကြောက်မက်ဘွယ်သောလှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဒေသရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘေးဖယ်ပျော်မွေ့စေခြင်းမှ, လိင်ရှင်းလင်းစွာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။
Rutgers မှမနုropဗေဒပညာရှင် Helen Fisher သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြည့်ရှုရန်အလုပ်လုပ်သည့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူမသည်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရသူများနှင့်ကြားနေသူတစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်တင်ပြသောလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမများကိုပြသခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဦး နှောက်၏ dopamine ဆုလဒ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သိသာထင်ရှားသည့်တက်ကြွမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ငွေနှင့်အစားအစာတို့ကဲ့သို့သောအခြားဆုလာဘ်များကို ဦး နှောက်ကတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆင်တူသည်။
အချို့လူနာတွေကသူတို့ကိုမကောင်းတဲ့ခံစားရစေသည်အော်ဂဇင်ပြီးနောက် amygdala အတွက်အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့ပြန်တက်လှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း
အဆိုပါသုတေသနစာပေလိင်-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါအပေါ်နီးပါးတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် Google ရှာဖွေရေး postcoital ဘလူးကိုခေါ်တစ်ခုခုအများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချက်တင်ခန်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဘယ်သူသည်ကိုသိ? အဲဒီမှာငါဒေနာများအတွက်အမျိုးမျိုးသောကုစား၏အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ, ငါ့လူနာသူတို့အားနီးပါးတူညီအများအပြားအကောင့်ကိုဖတ်ပါ။
ဆေးသမားမအောငျဖို့ခါတိုင်းလိုကုသမှတဆင့် run သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့သည့်အခါငါပြုသကဲ့သို့, ဘာလုပ်ရမှန်းအဖြစ်အနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ uncharted နယ်မြေထဲမှာသူတို့ဒါခေါ်ဝတ္ထုကုသမှုကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ မကြာခဏ, သင်လက်မှာ syndrome ရောဂါ၏အခြေခံဇီဝဗေဒအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့ထင်ကြေးအပေါ်အခြေခံပြီးထိုကဲ့သို့သောကုသမှုဒီဇိုင်း။ ဤသည်ကိုသူတို့ခဲအစဉ်အဆက်သတ်မှတ်သည်သောအခြေအနေများတွင်အတည်ပြုမူးယစ်ဆေးဝါးများကို အသုံးပြု. ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှကုသမှုတစ်ဦးကသဲလွန်စ Prozac နှင့်၎င်း၏ဝမ်းကွဲ, ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors, လေ့အချို့ဒီဂရီမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ serotonin သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကောင်းမွန်သည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးထဲမှာ၏အလွန်အကျွံလိင်များအတွက် decidedly မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြုပြင်နိုင်ပြီးပြင်းထန်မှုနည်းသွားလျှင်၎င်းသည်နောက်မှအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုလျော့နည်းသွားစေမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်ငါ SSRI ၏များသောအားဖြင့်မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်နိုင်ချေကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အသုံးချနိုင်သည်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဤဆေးတယောက်ကိုသိမ်း ယူ. ခဲ့သူမည်သူမဆိုသင်ပြောပြနိုင်သကဲ့သို့, ကပိုကောင်းခံစားရမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ယူပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖက်က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်တူစေခြင်းငှါ, မကြာခဏချက်ချင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါ၏အလူနာတွေအတွက်သောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ထွက်လှည့်။ တစ်ဦး SSRI အပေါ်ရုံနှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးလိင်လျော့နည်းပြင်းထန်သောအရသာကိုခဲ့စဉ်ကပြောကြားခဲ့သည်မရှိစိတ်ခံစားမှုပျက်ကျမှုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အခုတော့ငါ့အလူနာပိုကောင်းခံစားခဲ့ရသည်အနည်းဆုံးသုံးဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများရှိပါတယ်: အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအလုပ်လုပ်ခဲ့; ဒါကြောင့်တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့; သို့မဟုတ်တစ်ကျပန်းပွောငျးခွငျးရောဂါလက္ခဏာတွေ၌ရှိ၏ - ငါဘာမျှမလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့တိုးတက်ကြလိမ့်မယ်။
ငါပြဿနာ recurred လျှင်ပြန်လည်စတင်, ကုသမှုရပ်တန့်အကြံပြုသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာရောဂါလက္ခဏာပြန် လာ. ထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူယုတ်လျော့ - အကြံပြုခြင်း, ဒီဝန်ခံရမည်သေးငယ်တဲ့နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီး, မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ ဤလူနာများကကျွန်ုပ်ကိုဘာသင်ပေးခဲ့လျှင်၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာပြdeepနာများသည်နက်ရှိုင်း။ မှောင်မိုက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအမြဲတစေပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်တရားကတော့လူတို့၏အရေးကြီးဆုံးလိင်အင်္ဂါသည်အမှန်တကယ်တွင် ဦး နှောက်ဖြစ်သည်။ လိင်သည်အပြုအမူအရှိဆုံးဖြစ်သော်လည်းစိတ်ကျရောဂါသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဖြစ်နိုင်သည် - တစ်ခါတစ်ရံဇီဝဗေဒ၏ထူးကဲခြင်းထက်သိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ။
မူရင်းဆောင်းပါး New York Times ကိုဇန်နဝါရီလ 20, 2009